Mandeha aleha miaraka amin'ny alika - Inona no tokony hoeritreretinao
Alohan'ny mandeha miaraka amin'ny alika
Lohahevitra momba ny famokarana biby fiompy
Inona no ao anatin'ny entan'ny alika?
Satria hatramin'ny fotoam-pialan-tsasatra farany amin'ny fankamamian'ny fianakaviana, fa ahoana kosa no hatao amin'ny orona malaza? Mihamitombo hatrany hatrany ny haka ny alika eo amin'ilay dia goavana fa tsy handefa azy amin'ny namana, havana na ny mpivady alika. Fa rehefa mandeha miaraka amin'ny alika dia tsy maintsy eritreretina betsaka!
Raha ny marina, ny ankamaroan'ny alika dia mpikambana feno ao amin'ny fianakaviana. Isaky ny fianakaviana faharoa dia mikarakara fialantsasatry ny alika isan-taona, izay manampy betsaka kokoa ny fandaminana sy ny fandrindrana. Izay tokony hoeritreretinao ary inona no tsy maintsy atao sy tsofina alohan'ny fialan-tsasatra, dia ho hitanao eto.
Miara-mandeha amin'ny alika
Raha tsy te hanary ny orinasa mahazatra amin'ny namana efa-bavy amin'ny fialantsasatra any ivelany ianao, dia tokony hieritreritra aloha ny toerana mety. Tsy ny firenena rehetra no afaka mahazo izany. Amin'izay, tsy ny olona ihany, fa ny alika ihany koa dia afaka mankafy ny fialan-tsasatra indrindra, tokony hifampiraharaha amin'izay zavatra ilain'ny mpandray anjara tsirairay.
Ho an'ny alika dia mahafinaritra kokoa raha tsy mafana sy mafana loatra izany. Ankoatr'izay dia tokony hisy alokaloka ary ny alika dia tokony homena fahafahana haka an-jorom-bala trano fonenana na trano fonenana.
Te-haka vakansy amin'ny hotely iray ve ianao, manonta mivantana raha avela hiditra ao amin'ny hotely ny alika. Matetika anefa izany dia azo atao amin'ny fiampangana kely kely fanampiny.
Tokony handinika bebe kokoa ny tany ianao. Azo alaina ve ilay alika? Inona ireo fitsipika momba ny fitantanana ilay alika? Ahoana ny fandehan'ny dia - amin'ny fiara, fiaran-dalamby na dia ny fiaramanidina?
Tsy tokony hohadinoina ny teny fepetra takianaizay mety miovaova avy amin'ny firenena mankany amin'ny firenena. Ny fampahalalana dia azo jerena eto amin'ny tranokalan'ny seranam-piaramanidina (raha toa ka misy fiaramanidina amin'ny alalan'ny fiaramanidina) na ny Biraon'ny Foreign Office. Ohatra, ny alika dia tsy maintsy vaksinina farafahakeliny 6 herinandro lasa izay manohitra ny sangisangy rehefa mivezivezy any ivelany, dia tsy maintsy voatery hitondra ny pasipaoro biby.
Efa herinandro vitsy alohan'ny hanombohan'ny fialan-tsasatra efa ela, tokony hanolotra ny oronao ianao amin'ny mpitsabo anao ary hanao fanaraha-maso tanteraka. Raha mbola ilaina ny vakim-pamokarana araka ny fepetra fidirana amin'ny firenena fialan-tsasatra, dia resaho amin'ny vava anao avy hatrany.
Ny veterinaly tsara dia manondro anao amin'ny resadresaka momba ny loza aty amin'ny toerana misy anao / any amin'ny firenena mandroso ary manazava hoe inona no fepetra tokony horaisina raha misy tranga rehetra.
Indrindra fa ny biby any ivelany any dia matetika no tandindomin-doza noho ny aretina izay tsy dia azo eritreretina loatra ny atao any Alemaina. Ny leishmaniasis, ny foza sy ny ehrlichiosis dia vitsy amin'ireo moka ary ireo aretina mitaiza kely izay afaka mamono haingana. Amin'io fanajana io: Tsara kokoa ny mitandrina toy izay ny fandeferana.
Rehefa manangona, dia zava-dehibe koa ny hametrahana famatsiam-bola madinika kely iray, izay ahitana ny fanafody ny alikao, fa koa zavatra sasantsasany izay mety tsy ho hita ao anaty vakansy:
- Fiarovana ny alika alika volo
- Pikantsary, kofehy manga, sterile compresses
- Ny maso sy ny sofina
- takelaka hazo sarobidy
- Vovonan'ny elektropoly
- Lisitry ny veterinariana sy ny klinikam-pitsaboana any amin'ny toerana itodiana
Eny, tsy ny olombelona ihany no mila entana. Ny alika dia tokony, raha tsy voatery ao anaty valizy iray, ny zavatra rehetra ilainy mba hialana sasatra sy sambatra. Afaka mametraka mora foana ny lisitry ny lisitry ny lisitra noforonina.
Zava-dehibe eto - tsy toy ny olona izay te hahita zava-baovao amin'ny fialan-tsasatra - zavatra mahazatra izay fantatry ny alika sy tiany avy ao an-trano. Manamora izany ny alika hahatsapa ho any an-trano lavitra.
Alika anaty fialantsasatra
Amin'ny valizy alika rehefa mandeha miaraka amin'ny alika dia:
- Sakafo mahazatra, mihinana, mangalatra taolana
- Sakafo sy zava-pisotro
- Miankina amin'ny hafanana ao amin'ny toeram-pisakafoanana
- Tavoahangy rano
- Toeram-piompiana biby / biby
- Fitsaboana mpivarotra
- Miala tsiny, raha ilaina
- Ny kofehy, ny harona, ny kavina
- Adiresy miaraka amin'ny adiresin'ny trano / hotely & laharana laharana
- Kotbeutel, maneso ny alika
- pasipaoro biby fiompy EU
- Fepetra momba ny fiantohana ho an'ny antoka
- Mikarakara fonja, maso ary akanjo
- fiainana jacket
Efa nieritreritra ny zava-drehetra ve ianao mba hahatsapa ny alikanao amin'ny fialan-tsasatra toy ny ataonao? Moa ve ny lisitra fanamarinana voamarika ary ny boaty fitaterana alika dia mifanaraka amin'ny fepetra fiaramanidina sy ny pasipaoro ho an'ny biby ao anaty kitapo?
Dia maniry fialantsasatra mahafinaritra sy mahafinaritra amin'ny alika ianareo!
Fialamboly miaraka amin'ny alika | Fialan-tsasatra mandeha
Sarin'ny ankizy amin'ny alika
Sarin'ny alika amin'ny fo
Fialantsasatra amin'ny ankizy | Holidays & Travel
Ahoana ny fandaozana alika?
Sarin'ny pejy fananganana
Sarin'ny alika sy puppy